၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ | Myanmar President Office
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ
Submitted by cwmpo4 on Wed, 10/17/2018 - 09:47
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ဒုတိယသမ္မတက စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် ငတ်မွတ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် လူတိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြ နိုင်ရန်အတွက် ယခု ကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် မိမိတို့၏အနာဂတ်ဖြစ်သည့် ကလေးငယ်များအားလုံး ဘေးကင်းပြီး အာဟာရပြည့်ဝ သည့် အစားအစာများကိုလုံလုံလောက်လောက် စားသုံးနိုင်မှသာ ကျန်းမာသန်စွမ်း ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် အနာဂတ်လူ့အဖွဲ့ အစည်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
၂၀၁၇ ခုနှစ် (FAO)၏ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၈၁၅ သန်းကျော်သည် ပြင်းထန်သည့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဒဏ်ကို ကာလရှည်ခံစား နေကြရပြီး ယင်းကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကထက် ၃၈ သန်းကျော် တိုးတက် များပြားလာပါကြောင်း၊ ၁၅၅ သန်းသောအသက် ၅ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များ သည် ကြုံလှီသေးကွေးနေကြသည်ဟု သိရှိရပါကြောင်း။
အလွန်အမင်းဆင်းရဲသူ အားလုံးအနက်(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျေးလက်ဒေသ များတွင် နေထိုင်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အသက်မွေးကြသည်ဟု စစ်တမ်းများအရ သိရပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း လူဦးရေ၏(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် စိုက်ပျိုး ရေးကို အခြေခံသည့်ကျေးလက်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည့်အတွက် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသည် များစွာအရေးကြီးလှပါကြောင်း၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ပပျောက် ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ ကျေးလက်ဒေသ လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်ရန် ဆောင် ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် နေထိုင်ပုံ၊ စဉ်းစားပုံများကိုလည်း ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်များလည်း လိုအပ် လှပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် အစိုးရအနေနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများ ကို အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ဖန်တီးပေးရန်လည်း လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ယနေ့ကမ္ဘာကြီး၏ နည်းပညာပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲလာသည့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီတင်းနေထိုင်ကြသည့် ကျေးလက်ဒေသကိုများစွာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက် စေပါကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် လူအများစု မှီတင်းနေထိုင် ရာ ကျေးလက်ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ ထွက်ရှိလာသည့် သီးနှံများအရည်အသွေးမပြည့်ဝမှုများ၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် လူမှုစီးပွားရေး ချွတ်ခြုံ ကျမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာမပြည့်စုံမှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် စားရေရိက္ခာရှားပါးလာမှု၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါကြောင်း။
အကျိုးဆက်အနေဖြင့် နှစ်စဉ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းသည် ငှက်ဖျားရောဂါ၊တီဘီရောဂါနှင့် အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါသုံးမျိုးပေါင်းသေဆုံးမှု ထက်ပင် များပြားနေသည်ဟု သိရပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် မွေးကင်းစကလေးငယ် သေဆုံးမှု၏ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လည်း အာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့်ဟုသိရပါကြောင်း။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့အခမ်းအနားကို Our Actions are our Future. A# ZeroHunger world by 2030 is possible. “ငတ်မွတ်ကင်းစင် ၂၀၃ဝတွင် တို့ရဲ့အနာဂတ်တို့ပြင်ဆင်” ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာသည့် လူဦးရေကိုဝလင်စွာကျွေးမွေးနိုင်ရေးအပြင် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး တောက်ပသည့်အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ကြမည့် အနာဂတ်မျိုးဆက်ကိုပြုစုပျိုးထောင် ကြရန်အတွက် ဘေးကင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသည့် အစားအစာများထုတ်လုပ်နိုင်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျေးလက်လူနေမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးစသည့် အဓိကကျသည့်လုပ်ငန်း တာဝန်များကို မိမိတို့အနေဖြင့် ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် (FAO)၏ အကူအညီ၊ မိမိတို့အစိုးရ၏ မှန်ကန်ထိရောက်သည့် မူဝါဒများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ထိရောက်အောင်မြင်သည့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများနှင့် ဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း။
ကမ္ဘာတွင် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုခံစားနေကြရသည့် လူဦးရေ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း သည် အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်ဟု ဆိုပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း လူဦးရေ ၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး များ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း အလေးထားကြရန်လိုပါကြောင်း၊ အမျိုးသမီးထု၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည်လည်း မိသားစု၊ နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာ့အတိုင်း အတာအထိ ကြီးကြီး မားမားသက်ရောက်မှုရှိပါကြောင်း။
ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း သမဝါယမလုပ်ငန်း စဉ်များမှတစ်ဆင့် မြှင့်တင်ကြရန်လိုပါကြောင်း၊ ပုခက်လွှဲသည့်လက်သည် ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်မည့် လက်များဟုဆိုသကဲ့သို့ အနာဂတ်မျိုးဆက်ကလေးသူငယ် များ၏ အာဟာရပြည့်ဝရေး၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းရေးနှင့် ပညာရည်မြင့်မားရေးတို့သည် အမျိုး သမီးများနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါကြောင်း၊ မိသားစုစားသောက် နေထိုင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲရန်အတွက် အမျိုးသမီးထုကို ပညာပေးခြင်းနည်းလမ်းသည် အကောင်း ဆုံးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါကြောင်း။
၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် အမှတ်စဉ်(၂)ပြည့်မီရေးအတွက် ၂၀၁၈ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ ကျင်းပပြုလုပ် ခြင်းဖြင့် လူသားတို့ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကင်းစင်ရေးကို အလေးပေးဆောင်ရွက်သွား ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မိမိတို့အနေဖြင့်လည်း ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ကြိုးပမ်းကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စားရေရိက္ခာ ဖူလုံရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်မှုမရှိဘဲ ၂၀၃၀ မှာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုပပျောက်ရေးဆိုသည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ ရည်မှန်းချက်သည် အောင်မြင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ထို့အတူငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှုကို ပပျောက်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း အာဟာရပြည့်ဝရေး၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး၊ ပညာရည်မြင့်မားရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ ကြောင်း။
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိ ကျဆင်းခဲ့ပြီးမှ ယခုတဖန်ပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီး မိမိတို့ကမ္ဘာ့လူမှု အဖွဲ့ အစည်းကို ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပဋိပက္ခများ၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများ၊ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများ၊ တန်းတူရည်တူမရှိမှုများစသည့် အကြောင်းတရားများ ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ပပျောက်ရေးဆိုသည့် ရည်မှန်း ချက် အောင်မြင်ရေးသည် ယခင်ကထက်ပိုပြီး ခက်ခဲမည့်ပုံပေါ်နေပါကြောင်း။
သို့သော်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူထု အားလုံး လက်တွဲညီညီနှင့် ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ကြမည်ဆိုပါက စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး နှင့် အာဟာရပြည့်ဝရေးတွင် အကြီးအကျယ် တိုးတက်မှုရရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ရေရှည် တည်တံ့သည့် အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်(SDGs) ၂၀၃ဝကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ကြရန်သည် ကမ္ဘာ့လူသား အားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ငတ်မွတ်မှုနှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုကို တိုက်ဖျက်ကြသည့်နေရာတွင် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသည့် လူမှုဘဝလုံခြုံရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့သည့် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး၊ အာဟာရပြည့်ဝရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစသည့် ကဏ္ဍများတွင် အစိုးရပိုင်းအနေဖြင့် မှန်ကန်သည့်မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များချမှတ်နိုင်မှု၊ ထိရောက် မြန်ဆန်သည့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြေလျော့ပေးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးနိုင်မှု၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ် လုံး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများသည် အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း။
မိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် အာဟာရပြည့်ဝရေးကဏ္ဍများတွင် (FAO)ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရေး၊ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စသည့်ကဏ္ဍများတွင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်း၊ လိုအပ်တဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း။
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏စားနပ် ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍများတွင် နည်းပညာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အထောက် အပံ့များစဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများအတွက် မြန်မာ ပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားလိုပါကြောင်း။
စားနပ်ရိက္ခာများ လေလွင့်မှုမရှိစေရန် တိုးလာမည့် လူဦးရေ(၉)ဘီလီယံ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်၊ အာဟာရပြည့်ဝသည့် အစား အစာများ စနစ်တကျစားသုံးနိုင်ရန် မိမိတို့အားလုံးကြိုးပမ်းကြမှသာ ၂၀၃ဝခုနှစ်တွင် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုပပျောက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည့် “ငတ်မွတ်ကင်းစင် ၂၀၃၀ တွင် တို့ရဲ့ အနာဂတ်တို့ပြင်ဆင်” နှင့်အညီ မိမိတို့အားလုံး ကိုယ်စီတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ က ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှာစကားပြောကြားပြီး ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့၏ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ms. Xaiojie Fan က ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂစားနပ် ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ သဝဏ်လွှာကိုဖတ်ကြားသည်။
ယင်းနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဗီဒီယိုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကို ပြသသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတသည် အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာကြသူများ နှင့်အတူ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့အထိမ်း အမှတ်ပြခန်းများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးများ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စား လှယ်များ၊ သံတမန်များ၊ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပအစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် ဖိတ်ကြားသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်နာ အခမ်းအနားကျင်းပ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ချိုချို၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တက်ရောက်ကြည်ညို
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ထံ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ထံ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် (၁/ ၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် လမ်းညွှန်အမှာစကားပြောကြား
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် နှင့်ဇနီးဒေါ်ချိုချို ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် အဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်ပွဲသို့ လာရောက်ဆန္ဒမဲပေး
နိုင်ငံတော်အဆင့် MSMEs ထုတ်ကုန် ပြပွဲနှင့် ပြိုင်ပွဲ(နေပြည်တော်) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဒေသထွက်ကုန်ပြပွဲသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား
ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ ဆေးရှဲလ်နိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတနှင့်ဇနီးတို့အား ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့်ဇနီး ဒေါက်တာရွှေလွှမ်း နိုင်ငံတကာသံတမန်အဖွဲ့များနှင့်အတူ မန္တလေးသင်္ကြန်ပွဲတော် (အကြတ်နေ့)တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့် ဇနီး ဒေါက်တာ ရွှေလွှမ်း မန္တလေးသင်္ကြန်ပွဲတော် ပါဝင်ဆင်နွှဲ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အမျိုးသားယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကောင်စီ ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီ တတိယအကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား